Trapiche amethyst bụ obere iche iche nke quartz na-acha odo odo - ịchapụta agba - Video
Trapiche dị ka amethyst
Buyzụta eke amịkọlọtọ anụ ụlọ ahịa anyị
Trapiche amethyst (ma ọ bụ amịystya dị ka amethyst) bụ obere iche iche nke quartz na-acha odo odo nwere mpaghara nwere agba pụrụ iche. Ọ dị mfe ịchọpụta
Bara nnukwu uru dị na trapiche
Ezi ọla bara uru nwere ihe dị n'etiti akụkụ etolite. Agbanyeghị, ịgba agba dị mfe ma ọ bụ nsonye nke nwere kristal nwere ike ịmepụta usoro “dị ka aghụghọ” n'ụba. Nke a pụtara na kristal ndị a dị ka bara nnukwu uru dị ka bara nnukwu uru na-aga n'ihu, ebe n'ezi traktị a na-agbajikwa mineral na-etolite n'otu n'otu.
N'agbanyeghị nke a, mkpụrụ bara nnukwu uru dị a associatedaa mara mma na-ejikọta ya na akụ bara nnukwu uru ma dịkwa obere. Otu mineral ndị na-eme ka ezi traktọ nwere ike imepụta ụdị agba dị ka agba ma ọ bụ, ma ọ bụrụ na nke quartz gbachapụrụ agbacha, na-enweghị atụ. Na mgbakwunye, diamond na pezzottaite nwere ike ito ka ọla bara nnukwu uru.
Minenweta nwere agwa nwere obere kristal nwere ike ịmịpụta ụdị ọla bara nnukwu uru. Dịka ọmụmaatụ, trafilite dị ka rhodochrosite dị na Argentina na-eme na Argentina.
Amethyst sitere n'okike bụ ụdị odo odo nke iche iche nke kristal na-acha odo odo. Ọ nwere ya na violet na agba n'ihi irradiation nke eke ọla adịghị adịghị ọcha. N'ọnọdụ ụfọdụ yana njikọ yana mgbanwe ntụgharị adịghị adị. Ọnụnọ nke ihe metụtara nsị na-ebute nsonaazụ kristal dị mgbagwoju anya. Ọzọkwa, isi ike nke mineral bụ otu ihe ahụ ka nke quartz. N'ihi ya, ọ dị mma maka iji ya na ọla na ọnụahịa dị ọnụ ala.
Amethyst gemstone na - aputa ihe na uzo mbu. Site na akwa violet na-acha odo odo na-acha odo odo miri emi. Ọ nwere ike gosipụta otu ụzọ abụọ ma ọ bụ abụọ: acha ọbara ọbara na acha anụnụ anụnụ. Siberia, nakwa Sri Lanka, Brazil na Eshia bụ isi mmalite nke ụdị dị mma. Deberian nke dị omimi bụ ezigbo aha ọkwa. O nwere isi iyi odo na-acha odo odo nke dị gburugburu 75 / 80%, yana 15 / 20% acha anụnụ anụnụ. O dabere na isi ọkụ.
Trapiche amethyst pụtara
A na-ekwu na Trapiche Amethyst na-ewusi usoro endocrine na usoro mgbochi. N'ihi ihe ndozi kristal pụrụ iche, a na-ekwu na ọ na-eme ka ọrụ ụbụrụ dịkwuo elu, na-amụba itinye uche, na-eme ka ọ dịrị onye na-etinye ya mma. A na-ekwukwa na a na-akụ akụ a ka o mee ka ikike ọgụgụ isi dị mma, ka ọ dị mma maka iji ike mee ka a na-atụgharị uche. N'agbanyeghị ihe i kwenyere, ị nwere ike ịnụ ụtọ Trapiche Amethyst gị.
Tags Safaya, Trapiche